नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हाम्रो कौसी र करेसाबारी क्रान्तिको आवश्यकता विदेशमा भन्दा पनि नेपालमा बढी छ भन्ने महसुस भयो र सोच बन्दै गयो - दूर्जेय चेतना
हाम्रो कौसी र करेसाबारी क्रान्तिको आवश्यकता विदेशमा भन्दा पनि नेपालमा बढी छ भन्ने महसुस भयो र सोच बन्दै गयो - दूर्जेय चेतना
* हाम्रो कौसी र करेसाबारी क्रान्तिको सोच कसरी र किन बनाउनु भयो?
समय भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरे ताकाको हो। सिमानामा आएको तरकारी विषादि हालिएको छ र खान योग्य छैन भन्दा समेत दबाबमा परेर हामीलाई त्यो विष किन्न बाध्य पारिएको घटना याद छ हजुरलाई? त्यसै दिन मेरो मनमा यसको आवश्यकता छ भन्ने आयो। हाम्रो राजनीति र परिस्थिति यस्तो नाज़ुक बन्दै गयो कि हामीले के रकस्तो खाने भनेर समेत अरूले नियन्त्रण गरेको हेर्न बाध्य भइरहेका छौँ । अर्कोतिर कालीमाटीमा ५० रूपैयाँमा टमाटर बिक्री भइराखेको छ तर चितवनका कृषकको बारीको टमाटर २ रूपैयाँ किलोमा समेत बिक्री हुँदैन। सिन्डिकेट भन्छन क्यारे, म राम्रोसँग बुझ्दिन तर यहाँ राम्रो भइरहेको छैन भन्ने चाहिँ राम्ररी बुझेको छु। त्यसपछि मैले यसको अध्ययन गर्न थालेँ सानो करेसाबारीबाट । जब म आफ्नो सानो करेसाबारीबाटै पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सफल भएँ तब लाग्यो यो कुरा सबैले जान्न ज़रूरी छ। यसको आवश्यकता विदेशमा भन्दा पनि नेपालमा बढी छ भन्ने महसुस भयो र सोच बन्दै गयो।
* सामाजिक संजालमा तपाईँको यो अभियान निकै लोकप्रिय देखिन्छ।यसको वास्तविकता र तथ्यहरू वताइदिनोस् न।
सुरूमा आफूले उत्पादन गरेका कुराहरू आफ्नै फेसबुकमा राख्दा निकै साथीहरू प्रश्नहरू गर्नुहुन्थ्यो। यसलाई कृषिसँग सम्बन्धित समूहमा राख्न पाए सबै लक्षित समूहमा पुग्नेथियो भनेर त्यसताका देखिएका कौसी र करेसावारी समूहहरूमा देखाउने कोसिस पनि गरेका थियौँ । तर हामीले सिकाएका कुराहरू, पोस्ट गरेका विषयहरू चाहिएको बेलामा पोस्ट नहुने र कति त हटाइएको पनि पाइए पछि यस्तो पनि नहोस् र लगातार सिकाउन पनि पाइयोस् भनेर सुरु गरेका थियौँ । अहिले सबै भन्दा सक्रिय समूहको रूपमा चलिरहेको छ। कुनै समस्या आए सोध्ने र आफूले गरेको उपलब्धी देखाउने साझा समूह भएको छ। सिक्न र सिकाउन आउने गर्नुहुन्छ सबै साथीहरू यसमा। हामी तथ्यहीन कुराहरू, प्रचार र व्यापारिक पोस्टहरू गर्न दिँदैनौँ जसले गर्दा सिक्न र सिकाउन सजिलो भएको छ । त्यसैले सबैले माया गरिदिनुभएको छ।
* इच्छाशक्ति र ज्ञान भए परदेशमा वसेर नि स्वदेशमा यति राम्रो अभियान गर्न सकिँदो रहेछ है ?
एउटा तथ्य भन्छु पहिले। नेपालमा आयात हुने लगभग ९०% तरकारी सहरी क्षेत्रमा खपत हुन्छ। गाउँघरतिर न्यून खपत देखिन्छ। हामी सोचौ त, हामीले हाम्रो देशमा आयात हुने खुर्सानी मात्र रोक्न सकियो भने अरबौँ जोगिन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा गमलामा लगाएको खुर्सानीले एउटा परिवारलाई वर्षभरि वा ६ महिना नै भए पनि पुग्यो भने देशको कति पैसा बाहिर जानबाट जोगियो । पोखरामा मात्र गत वर्ष ३० हज़ार घर परिवारको कौसी र करेसावारीको तरकारी खेतीका कारण अघिल्लो वर्ष भन्दा २८ करोड रूपैयाँ कमको आयात भएको छ। यो संख्या सानो त हैन नि। सबैले कौसीको र करेसाको प्रयोग गर्न सके आर्थिक सामाजिक र मानसिक समस्यामा निकै राहत पुग्ने देखिन्छ । अब यो क्षेत्रमा विशेष गरेर सहरी क्षेत्रीय बसोबास गर्नेहरूलाई जागरूक गर्नपर्यो भन्ने सोच भयो । विस्तारै यस अभियानमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका पचासौँ हजार मानिस र तिनसँग अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका अन्य लाखौँ मानिसहरूलाई उचित खेतीका निम्ति आववश्यक ज्ञान र परामर्श प्रदान गर्न विदेशमा बसेर पनि सुरू गरेका थियौँ । सामाजिक संजालकै कारण यो यो अभियान सम्भव भएको छ। अब हामी संसारभर लगभग ८८ वटा देशमा फैलिएका छौँ । नेपालका प्राय हरेक ठाउँबाट सहभागी हुनुभएको छ। यो सोच आएसँगै सुरूको अवस्थादेखि नेपालमै रहेर सन्जु अधिकारीज्यू जोडिनु भएको थियो र लगातार यस अभियानको सहयात्री हुनुभएको थियो । अहिले भने यस अभियान संचालनमा नेपालमै रहनु भएका अन्य थुप्रै साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ र झन व्यापक हुने तयारीमा छौँ ।
* हजुरका यस्तै अन्य समूह पनि छन् र सामाजिक संजालमा । यो समूह अन्य भन्दा फरक के छ? के हुने रहेछन् समस्या र बाधा?
सही भन्नु भयो। हामीले सुरू गर्नु पहिले संजालमा अन्य समूहहरू पनि थिए र अझै पनि सक्रिय भएर चलिरहेका छन्। उनीहरूको योगदान अतुलनीय छ र रहने नै छ। सबै समूहमा सक्रिय सहभागिता भए सबैले कौसी वा करेसामा तरकारी लगाएर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर नै सिकाएका छन्। प्रशंसनीय काम गरेका छन्। हामी पनि यसै अभियानको हिस्सा हौँ । हाम्रो अभियान भने सिकाउने कुरामा बढी केन्द्रित छ । पारिको हैन, अब बारीको भनेर समस्या सामाधानमा केन्द्रित छ । कौसी वा करेसाबारीका किसानलाई समस्या आए सोध्ने र जिज्ञाशा राख्ने साझा ठाउँको रूपमा अगाडि आएको छ। समस्या र बाधा खासै छैनन् तर अवरोध गर्ने, कुरा काट्ने, कसैको भाग खोस्न आएझैँ गरेर मानिसहरू भड्काउने, नराम्रा कमेन्ट गर्ने, गर्न लगाउने, केही असामाजिक तत्वहरू त सामाजिक संजालको रोग नै हो । कहिलेकाहीँ त ज्यानकै धम्की पनि आइरहन्छ । कर्म गर्दा सानातिना विघ्नबाधा आउनु स्वभाविकै हो । हामी विचलित नभई काममा सकृय छौँ र रहिरहनेछौँ ।
* फेरि एकथरी मान्छे छन् नि स्वदेशमा, विदेशमा बसेर हामीलाई खुब सिकाउने भन्ने, तपाईँको अनुभव के छ यसमा?
हामी नेपालीहरूको विदेश बस्ने, विदेशी भूमिलाई कर्मभूमि बनाउने इतिहास नयाँ पक्कै हैन । हाम्रो देश नेपालको मुख्य आम्दानीको स्रोत के भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । भूकम्पले नेपालमा घर भत्किँदा विदेशमा बस्नेको पनि मन उत्तिकै भत्किएको थियो । बाढ़ी र पैरोले नेपालमा गाउँ वगाउँदा विदेशमा बस्नेको मन बढी चिसो भएको उदाहरण दिन अब नपर्ला । आफ्नाहरूको राम्रो भएको, आफ्नाहरूले राम्रो गरेको देख्न खोज्नु हामी विदेशमा बस्नेहरूको गल्ती त पक्कै हैन होला । यसै बीच हाम्रो देशमा भएका नेतृत्वले पनि यी हाम्रा नै हुन् भनेर अँगाल्न नसक्दा र सम्मानजनक कानुनी व्यवस्था नगरिदिँदा यो पर्खाल भएको देखिन्छ।
* आफ्नो बारेमा पनि केही भनिदिनोस् न। विशेष गरेर दूर्जेय चेतना के हो?
दूर्जेय चेतना एउटा सपना बोकेर, मन भारी गरेर आफ्नाहरूलाई पछाडि छोडेर अनेकौ कारण र परस्थितिले विदेश पलायन भएको युवा हो। मलाई पनि नेपालमै बसेकाहरू भन्दा कम माया नेपालको लाग्दैन। नेपालमा लामो समय त्रिविमा अध्यापन गरेर विदेश हिँड्दा एउटा सपना बोकेर हिँडेको मानिस हुँ । विदेशमा पनि थुप्रै कथाहरू बुनेको छु। मानिस नामसँगै जात धर्म र पदवी खोज्न थाल्छ तर म यसका पछाडि कहिल्यै लागेर हिँडिनँ । विदेशमा कहिले मज़दूरी गरेँ, कहिले PhD र post doc गर्रेँ, कहिले शिक्षक त कहिले वैज्ञानिक भएर काम गरेँ । यही अनुभवले चेतना मर्दैन र अजय अर्थात दूर्जेय रहन्छ भनेर सिकायो र परिणामत: लगातार सिकाउने काममा लागि रहेको छु।
* अन्य थप कुरा केही भन्न चाहनुहुन्छ Nepalmother.com को मार्फ़त संसार भरका पाठकहरूलाई ?
सबै भन्दा पहिले हजुरले यसरी पहिचान गरेर केही समय कुरा राख्न दिनुभएकोमा हामी सम्पूर्ण एड्मिन टिम हजुरप्रति आभारी छौँ । हामी सिक्ने र सिकाउने अभियानमा छौँ । वर्षभरि कति दिन आफैँले उत्पादन गरेको खानुभयो भने आफैलाई प्रश्न गरिदिनु होला। हामी यो अभियानमा सबैलाई जोडिन अनुरोध गर्दछौँ । ख़राब कुरा अवश्य हैन । त्यसैले राम्रो कुरालाई प्रोत्साहन दिनुहोला र सबैलाई जोडिदिएर सहयोग गरिदिनु होला। देखेर पनि त सिकिन्छ। सिक्न मन हुँदा हाम्रो आफ्नै YouTube च्यानल पनि बनाएर सिकाउन थालेका छौँ । अन्तिममा सबै समूहमा सहभागी साथीहरूलाई धन्यवाद र एड्मिन समुहमा रहनु भएका सन्जु अधिकारी, दिलिप आचार्य, शिवहरि वास्तोला र विजया मानन्धरज्यूहरूमा पनि हार्दिक आभार ।
please visit this links below: